Undeclared war in the Ethiopia’s Oromia region by Abiy Ahmed Ali!! – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsUndeclared war in the Ethiopia’s Oromia region by Abiy Ahmed Ali!!
Undeclared war in the Ethiopia’s Oromia region by Abiy Ahmed Ali!
Harargee Bahaa, Qarsaa!
Daandiin asfaaltii Finfinnee irraa gara Dirre Dhawaa Harar deemu magaalaa Qasaa keessatti kana fakaata.
Fincilli Xumura Garbummaa (FXG)
tarsimoo caasaan eeramuu gaggeeffamaa
qaamni FXG dura dhaabatuu murtoo irraatti fudhatamuuf gaafatamaa ni fudhataa
haleellaa diinni raawwatuu ofirraa qolachuu fi tarkanfii madaalawaa fudhachuun dirqamaa
kabajaa eenyummaa namoota sarbuuf tattaafatan ofirraa dhowwinaa
FXG mirgaa sarbamne , Biyyaa dhaalamne, kan itti deebifannu dha
sarbamaa mirgaa, roorroo,hidhaa Oromoo fi lammilee Oromiyaa irraatti raawwattuu goolabaa itti gochuu dha.
FXG haga Bilisummaa fi walabummaa lammilee Oromiyaa kabajamuu ti itti fufa.
Furmaanni gabaabaan Mootummaa Ceehumsaa Biyyooleessa Oromiyaa Ijaaruu dha.
OMN: ODUU IJOO (SAD 21/2020)
Guyyaa dheengadda halkaniin poolisoonni zoonii 2 seenanii hidhamtoota siyaasaa irratti sakatta’iinsaa fi reebicha cimaa erga raawwtaniin booda Abubakar Nuuree zoonii kana keessaa baasuun fuudhanii gara zoonii 5 geessan.
Zoonii 5 keessa warra hattootaa fi shiftoota ummata saamaa fi ajjeesaa turan qofatu jira
Kibba Lixa Shaggar ona Ammayyaa magaalaa Qotaa keessatti waraanni PP Qeerroo Geetuu Jireenyaa jedhamu mana hidhaa Waajjira poolisii Ammayyaatii baasuun ajjeesanii reenfa naannoo mana isaatti eda gatanii jiru.Geetuun miliishaa fi poolisiin qabuuf yeroo hordafaa jiranitti, bulchaan aanaa kan yeroo darbe sangoota bitaa jedhu, Tulluu Tashoomaa waliin koottu jedhanii waamanii hidhaatti darbani.
Geetuu Jireenyaa nama haadhaa fi abbaa hin qabne, nama hojii dhuunfaa hojjetee of jiraachisudha.
Lubbuun isaa haa jannatu.
Suutuma,suuta jabaa hedduu dhabne!